Webtrends Demos Nhazi Ọgbọ Ọzọ | Martech Zone
Wenezdee, Machị 2, 2011 Tọzdee, Machị 3, 2011 Douglas Karr
Anọ m na Webtrends Engage ogbako na San Francisco ma nwee ụda vidiyo na ọdịnaya iji kọọrọ gị izu ole na ole sochirinụ. Ekwesịrị m iwepụta vidiyo a ozugbo n'agbanyeghị…
Webtrends na-agba ọsọ n'oge gara aga ọ bụla asọmpi na mwepụta Eprel na-abịanụ - nke ahụ gụnyere interface njirimara HTML5, ahụmịhe onye ọrụ ọhụụ, mmechi siri ike na Mobile na Social Media, yana mwepụta PostRank data.
Lee ihe ịtụnanya screenshots na Nchịkọta 10 saịtị. Ọ bụrụ na ị na-eche ma ọ bụrụ na ndị a bụ naanị mockups… Nope! The Webtrends otu e demoing mbipute-ebi n'oge ogbako!
Tags: Nnụnụ Ogeakwụkwọ ahịaelekọta mmadụ ibe edokọbara